200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Kumanaan dad ah ayaa mudaaharaad ka dhigaya magaalada Calais ee dalka Faransiiska iyago codsanaaya in la joojiyo qaxootoga | UfeynNews.com
Kumanaan dad ah ayaa mudaaharaad ka dhigaya magaalada Calais ee dalka Faransiiska iyago codsanaaya in la joojiyo qaxootoga
nDarawalada gawaarida xamuulka ah ayaa isku dayaya in ay xiraan gabi ahaanba wadooyinka magaalada Calais
Kumanaan dad ah ayaa mudaaharaad ka dhigaya magaalada Calais ee dalka Faransiiska iyaga oo dalbanaya in la xiro xero qaxooti oo loo yaqaano Jungle.
Dadkaasi waxay qorshaynayaan in ay xiraan wadooyinka waawayn, ayna isku aruursadaan wadada aada dekedda.
In kabadan 7,000 oo ruux ayaa hadda ku nool xeradaas iyada oo xaaladoodu liidato, badankooduna waxay isku dayayaan in ay ku boodaan gawaarida waawayn ee xamuulka si ay u gaaraan dalka Britain.
Dadka mudaaharaadaya waxay sheegayaan in xeradaasi ay wax u dhimayso magaalada ayna carqaladaynayso hawlaha dekedda. Arrintan ayaana noqon doonta mudaaharaadkii ugu waynaa ee dadka deegaanku ay kaga soo horjeedaan xeradaas qaxootiga.
Image captionBoqolaal dad ah ayaa iyaga wadada xiray
Image captionBeeralayda ayaa iyagana ka qaybqaadanaya mudaaharaadka
Image captionMudaaharaadayaasha ayaa maraya wadooyinka gawaarida
Image captionDarawalada gawaarida xamuulka ah ayaa mudaaharaadka ku bilaabay in ay tartiib u wadaan gawaarida
Duqa magaalada Calais, Natacha Bouchart ayaa sheegtay in ay qorshaynayso in ay ku biirto mudaaharaadka iyada oo sheegtay in xaaladda xeradaasi ay noqonayso mid aan loo adkaysan karin.
Dadka ku nool xeradaasi intooda badan waxay ka soo kala jeedaan Bariga Dhexe, Afghanistan iyo Afrika waxayna rajaynayaan in ay ka sii gudbaan iyaga oo isku dayaya in ay si sharci darro ah kaga baxaan iyaga oo adeegsanaya dadka wax tahriibiya.
Image captionMore than 7,000 people currently live in the Jungle
Weerar qorshaysan oo ay ku lug lahaayeen ciidamo shisheeye iyo kuwo Soomaali ah ayaa la sheegay inuu xalay ka dhacay deegaanka Tooratoorow oo qiyaastii 35 km galbeedka ka xiga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Shirka G20 oo Shiinaha ka socda maalintii labaad
Halkan ka daawo waratada xaafadda Islii
Puntland oo soo saartay sharci cusub ee kufsiga
Google oo bilawday video app oo lagu hadlo – Duo
Haweenka Soomaalida Itoobiya oo door wayn ciyaaray